प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सडकमा कांग्रेस, – bampijhyala.com
Home > समाचार > राजनिती > प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सडकमा कांग्रेस,
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सडकमा कांग्रेस,
१३ पुष २०७७, सोमबार १५:५३ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सोमवार १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । यही पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट परेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका बेला दलहरू सडकमा उत्रिएका हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भक्तपुरको कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तनहुँको कार्यक्रममा सहभागी छन् ।
काठमाडौंको बानेश्वरमा प्रकाशमान सिंहले सम्बोधन गरेका छन् भने कोटेश्वरको सभामा विश्वप्रकाश शर्माले सम्बोधन गर्दैछन् ।
कांग्रेसका भावी सभापतिका प्रत्यासी शेखर कोइरालाले विराटनगरको सभालाई सम्बोधन गर्दा प्रभावशाली युवा नेता गगन थापा नेपालगञ्ज पुगेका छन् ।
मनको मायाँ म्युजिक भिडियो बजारमा आउदै
माइतीघरमा ओलीको कदमविरुद्ध डम्फू बजाएर नागरिक अगुवाको खबरदारी
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति माग्दै १३ पुष २०७७, सोमबार १५:५३
हिलोन् नये व्यथा (फंगल इन्फेक्शन) गिनागु ? १३ पुष २०७७, सोमबार १५:५३
थनु लुँय भाउ थिरकु १३ पुष २०७७, सोमबार १५:५३
बाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेप नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन बैंकको कति ? १३ पुष २०७७, सोमबार १५:५३
प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दै १३ पुष २०७७, सोमबार १५:५३